September 12, 2019 | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
भाद्र २६,काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेंगु संक्रमणबाट प्रदेश नम्बर ३ बढी प्रभावित भएको जनाएको छ । विभागले बिहीबार संचारकर्मीसंग अन्तरक्रिया गर्दै सबै भन्दा बढी प्रदेश ३ डेंगुबाट प्रभावित भएको जनाएको हो । जिल्लागत रुपमा भने चितवन सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी मकवानपुर दोश्रो र तेश्रोमा कास्की जिल्ला डेंगु संक्रमणबाट प्रभावित भएको विभागका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिए । रोगको ठ्याक्कै उपचार नभएकाले लक्षणका आधारमा उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दे उनले आफुखुसी औषधी सेवन नगर्न पनि सबैसँग आग्रह गरे । उनले…
समाचारडेंगु संक्रमणबाट प्रदेश नम्बर ३ सबैभन्दा बढी प्रभावित : विभागLeaveacomment
नवलपरासीको दाउन्नेमा बिहीबार बिहान यात्रुबसमा आगजनी भएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ८४५३ नम्बरको बसमा बर्दघाट नगरपालिका वडानम्बर ४ खुुर्सानी खोलामा आगजनी भएको हो ।प्रदेश पाँच ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी रामप्रकाश शाहका अनुसार गाडीलाई साइड लगाएर आगजनी गरेको भेटिएको हो । डिएसपी शाहले घट्नावारे अनुसन्धान सुरु भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले घटनामा संलग्नहरुको खोजीकार्य भइरहेको पनि जनाए पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्नेमा यात्रुवाहक बसमा आगलागी भएको छ। कञ्चनपुर बेलौरीबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ८४५३ नम्बरको यात्रुवाहक बसमा आज बिहान ५ बजे…
समाचारनवलपरासीमा यात्रुबाहक बसमा आगजनीLeaveacomment
जिवन सधै एकै लयमा बग्दैन । हरेक दिन नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छन् । यस्ताे अवस्थामा कहिलेकाही अाफुलाइ एकदमै कमजाेर महसुस हुन्छ । त्याे कमजाेरपनलाइ व्यक्तिले सहि समयमा व्यवस्थित गर्न सक्याे भने त्याे एउटा सिकाइ बन्छ, बलियाेपनमा परिणत हुन्छ भने त्याे कमजाेरपनलाइ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने जिन्दगी नै खतरामा पुग्छ । के तपाइ अाफुलाइ कमजाेर महसुस गरिरहनु भएकाे छ ? यि विधी अपनाउनुहाेस् अाफुले पढिरहेकाे क्षेत्र या काम गरिरहेकाे क्षेत्रका नयाँ कुराहरू खाेजेर पढ्नुहाेस् । इन्टरनेटमा त्यस्ता कुराहरू सजिलै उपलब्ध हुन सक्छन् । अाफ्नाे काम या पढाइकाे क्षेत्रकाे नयाँ कुरा…
काठमाण्डौ – प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक सामान्य संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर दुवै विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । राष्टिय सभाले सामान्य संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालनका लागि दुवै विधेयक महत्पूर्ण ठानिएको छ । दुवै विधेयक प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक हो । दुवै…
समाचार१५ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश, प्रदेशले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेLeaveacomment
कंगोमा रेल दुर्घटनाहुँदा करिब ५० जनाको मृत्यु भएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ। कंगोको मानवसहायता मन्त्री स्टिभ बिकायीले तानगानयिका प्रान्तको मियीबारिदी क्षेत्रमा दुर्घटना भएको भन्‍दै हालसम्म २३ जना घाइते भएको बताए। हाल घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरि उद्धारकार्यको काम भइरहेको बताइएको छ। घटनाबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। श्राेत pahilopost
समाचार५० जनाको मृत्यु, कंगोमा रेल दुर्घटनाLeaveacomment
भनिन्छ हाँस्दा र मुस्कुराउँदा मानसिक र शारीरिक रुपमा फाइदा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । तर चीनमा एक महिलाको जोडले हाँस्नु नै अभिसाप बनेको छ । गुआन्गझूको दक्षिण रेलवे स्टेशनमा ट्रेनमा सवार गरिरहेकी एक महिलाको जोडले हाँस्दा चिउँडो बाहिर निस्किएको छ । उक्त रेलमा सवार रहेका डाक्टरले तुरुन्त उनको चिउँडो ठिक गरिदिएका थिए । यो घटना सेप्टेम्बर ८ को हो । यो घटनालाई स्थानीय मिडियामा बुधबार बाहिर ल्याएका थिए । ठिक भएपछि महिलाले उनलाई यस्तो घटना पहिले पनि भएको बताएकी थिइन् । गर्भवती भएको समयमा बान्ता गरेको समयमा पनि चिउँडो बाहिर आएको…
समाचारजोडले हाँस्दा एक महिलाको चिँउडो नै बाहिर आएपछि...Leaveacomment
रौतहट । रौतहटको राजपुर नगरपालिका वाड नं. ८ कुडिया बजारमा बिहीबार बिहानदेखि नै तनाबग्रस्त बनेको छ । बुधबार मुस्लिम समुदायको मुहरर्म पर्व मनाउन गएका युवाहरूले हिन्दुहरुले मनाउने पर्व छठको स्थानमा क्षति पुर्याएपछि भएको बिवादले आज पनि सो क्षेत्र तनाब ग्रस्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायब उपरिक्षक नबिन कार्कीले जानकारी दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो भिडलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि २८ राउण्ड हवाइ फायर र ३० राउण्ड अश्रु ग्यास सहित ५८ राउण्ड गोली चलाउनु परेको डिएसपी कार्कीले बताए । सो क्षेत्रमा बिहीबार बिहानै देखी डिएसपी कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालित थिए…
समाचाररौतहटको राजपुरमा गोली चल्यो, स्थिति तनावग्रस्तLeaveacomment
रोल्पा : पुर्वी रोल्पाको एक वडा कार्यालयमा बम विष्फोट भएको छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयमा सकेट र पेट्रोल बम प्रहार गरिएको हो । बम विष्फोटनबाट कार्यालय भवन चर्किएको छ भने वडा अध्यक्षको कोठामा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्र्रहरी नायव उपरीक्षक चित्र गुरुङका अनुसार भवनबाहिर सकेट बम र कोठाभित्र पेट्रोल बम प्रहार गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । झ्यालबाट पेट्रोल बम प्रहार भएपछि आगलागी हुँदा कोठाको सोफासेट, कार्पेट र प्लाष्टिकका कुर्सी जलेका छन् । भदौ २५ गते मध्यरातमा बम विष्फोट गराइएको प्रहरीको भनाइ छ…
समाचारवडा कार्यालयमा बम विष्फोटLeaveacomment
बुटवलको चौराह अस्पतालले डेंगी परीक्षण नि:शुल्क गर्ने
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ कालिकानगरस्थित चौराह अस्पतालले गरिब बिरामीको डेंगीको परीक्षण नि:शुल्क गर्ने भएको छ। गत साउन अन्तिम सातादेखि फैलिएको डेंगीले जिल्लाभर भयावह अवस्था ल्याउन थालेपछि अस्पतालले गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूको परीक्षण नि:शुल्क गर्ने भएको हो। अस्पतालले आयस्रोत राम्रो भएका व्यक्तिहरूले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई छुट्याएको सुविधाको प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। अस्पतालका अध्यक्ष सुदन ज्ञवालीले अस्पतालले शुल्क तिरेर डेंगीको परीक्षण गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई नि:शुल्क गरिएको जानकारी दिए। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रममा डेंगी परीक्षणका लागि कुनै निवेदन र…
समाचारबुटवलको चौराह अस्पतालले डेंगी परीक्षण नि:शुल्क गर्नेLeaveacomment
असोज ५ देखि दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला
काठमाडौं : दसैंका लागि असोज ५ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ। बिहीबार यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघबीच यस्तो सहमति भएको हो। महासंघका प्रवक्ता सरोज सिटौलाका अनुसार भाडा समायोजनको जिम्मा सरकारलाई दिँदै ५ गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको हो। दसैं, तिहार र छठको अवसरमा काठमाडौंमा बस्ने लाखौं मानिस घर फर्किन्छन्। काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउने अधिकांश मानिस विशेष पर्वको अवसरमा घर जाने गर्छन्। लाखौंको संख्यामा घर फर्किने सर्वसाधारणाको यात्रा सहज बनोस् भनेर सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्दै आएको छ। काठमाडौं : दसैंका लागि…
समाचारअसोज ५ देखि दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाLeaveacomment